Filed under: ဆောင်းပါး — 11 Comments	01/11/2010
လန်ဒန်အရှေ့ပိုင်းက ကျွန်တော်နေတဲ့ ရပ်ကွက်လေးကို ညဘက် အလုပ်က ပြန်လာရင် တခါတခါ ဒီလိုပဲ ရဲတွေက စစ်တတ်တယ်၊ သူများတွေ အစစ်ခံရတာကို ကြည့်ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။ ရဲက သူ့တာဝန်အရ စစ်တာ (လန်ဒန်ရဲတွေက အားကိုးရတယ်လို့ နာမည်ကြီးတယ်)၊ အစစ်ခံရတဲ့ သူကလည်း မဟုတ်တာ မလုပ်ထားရင် ဘာမှတော့ ကြောက်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အဲဒီလို တွေ့ရင် ကြားက စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ရဲက စစ်နေတော့ သူများတွေက ကြည့်ကြမှာပေါ့။
အခုလည်း ကျွန်တော့်ကို ဘယ်မှာနေသလဲ၊ ဘယ်သွားမှာလဲ၊ အထောက်အထား တစ်ခုခု ဘာပါလဲ မေးတာပေါ့လေ။ အဲဒီလို မေးတာကို ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မေးတုန်းတော့ ကောင်းကောင်း ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်၊ မဟုတ်ရင် အလုပ်ပိုရှုပ်မှာစိုးလို့…၊ ဒါနဲ့ အပြန်အလှန် စကားပြောပြီး ထွက်လာတော့ “ဒါ ငါ့ နိုင်ငံ မဟုတ်လို့ပဲ“လို့ စိတ်ထဲတွေးမိတယ်။ ကိုယ်က ဒီမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားကိုး…။ ***
မနေ့ကပဲ တခါ ရုံးမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အင်္ဂလိပ်တစ်ယောက်က မေးတယ်၊ “မင်း ဒီမှာ နေရတာ ကြိုက်လား၊ အမြဲ နေသွားမှာလား“ တဲ့။ “အင်း… အခုတော့ နေလို့ ကောင်းပါတယ်၊ အမြဲတော့ မနေပါဘူး“ လို့ ချက်ချင်း ကျွန်တော် ဖြေတယ်။ စဉ်းစားစရာကို မလိုတဲ့ မေးခွန်းတွေလို့ တွေးမိတယ်။ ဖြေပြီးမှ ငါ ဒီလောက် မြန်မြန် ဘာလို့ ဖြေနိုင်နေတာလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးရင်း ခေတ္တခဏတော့ နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းတဲ့ အရသာ ခံစားခဲ့ရတယ်။
“ဟေ့ကောင်… မင်း ထွက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ထက် ကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခု မကြာခင် ရလိမ့်မယ်၊ တစ်ခုခု ပိုရချင် ပိုမြင့်ချင်ရင် နဂိုနေရာကို စွန့်ရတယ်၊ ခွာရတယ်ကွ၊ အပြောင်းအလဲ လုပ်ရတယ်“ လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တာမို့ အဲဒီလို လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်မှန်းထားတဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်းမှာ နောက်ထပ် အလုပ်တစ်ခု ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြန်မရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု မဆိုစလောက် ကျဆင်းစ ပြုချိန်မှာပဲ အစ်မက အဲဒီလို အားပေးခဲ့ဖူးတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အစ်မနဲ့စကားပြောပြီး တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက် အလုပ်ကို ရခဲ့တယ်။
အစ်မနဲ့ စကားနည်းနည်း ပြောဖြစ်တော့… “ဟေ့ကောင်… ငါ နိုင်ငံခြား ဘာဖြစ်လို့ လာသလဲ သိလား“ တဲ့၊ “လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ အရွယ်မှာ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ကြောင်း ပြဖို့နဲ့ ပိုက်ဆံ၊ ပညာ၊ အတွေ့အကြုံ ရှာဖို့ကွ“ တဲ့။ အစ်မက စကားပြော ပြတ်တယ်၊ စကားပြတ်သလို သူ့ဘ၀ အောင်မြင်နေအောင် အလုပ် လုပ်တာလည်း ပြတ်သား တိကျတယ်။ နိုင်ငံခြားကို အပျော်လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားကို လွတ်လပ်မှု ရှာဖို့ လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားကို ယောက်ျား၊ မိန်းမ ရှာဖို့ လာတာ မဟုတ်ဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် အစိုးရ မကောင်းလို့၊ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့၊ လို့… လို့… လို့…. တွေနဲ့ သူလာတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်လို့ လာတာ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ချင်လို့ လာတာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ရလို့ လာတာ။
မြို့ကြီးတွေမှာတော့ စင်ကာပူရောဂါက အတော်လေး ပျံ့ပွားပါတယ်။ ပညာသင်ဖို့နဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ စင်ကာပူကို ထွက်ကြပါတယ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းနှစ်တွေက စပြီး စင်ကာပူက ခေတ်စားလာပါတယ်။ အင်းစိန်ဂျီတီအိုင်လို ကျောင်းက စင်ကာပူမှာ ပိုလီဆိုပြီး ဖွင့်ထားတာကို သွားတက်ကြတာပါ။ အရင်ကတော့ အင်းစိန် ဂျီတီအိုင်ကျောင်းက နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အင်းစိန်ကျောင်းက ဆင်းရင် နိုင်ငံခြားမှာ လစာကောင်းကောင်း အလုပ်တွေ အသာလေး ရပါတယ်။ ဒီအစိုးရတက်မှပဲ အင်းစိန်ကျောင်းလည်း ဘ၀ပျက်ပါတော့တယ်။
ဒါတောင် ရန်ကုန်အခြေစိုက် အေဂျင်စီတချို့ရဲ့ ရိုက်စားတွေနဲ့ ကလေးက တော်တော် မိဘက ကဲကဲ ဖြစ်နေတဲ့ စင်ကာပူရောဂါရှင်တွေ အတွေ့မှာ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အေဂျင်စီနဲ့ အထုပ်ပျက်သွားတဲ့ မိသားစုတွေလည်း တဖြည်းဖြည်း များလာခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း နောက်ခြေတစ်လှမ်းတိုးလို့ စင်ကာပူ ထွက် အလုပ်ရှာသူတွေလည်း တစ်လကြာ တခါ သက်တမ်းတိုး နှစ်လကြာ နေလို့မှ အလုပ်မရရင် ပြန်လာပြီး တစ်က ပြန်စရသူတွေလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
“အဆင်ပြေတဲ့လူ လက်တဆုပ်စာကိုပဲ ကြည့်ပြီး ထွက်သွားကြတယ်၊ အဆင်မပြေတဲ့လူက ထောင်သောင်းမက ရှိတယ်။ သမုဒ္ဒရာထဲ မျောနေတဲ့ ရေခဲတုံးကြီးလိုပေါ့ရှင်၊ ရေပေါ်မြင်နေရတဲ့ အပိုင်းက နည်းနည်းပေါ့၊ ရေအောက်ထဲမှာက မိုင်နဲ့ချီကို ရှိနေတာကိုး… ဒီလိုပါပဲ ကျရှုံးသွားတဲ့လူတွေ အများကြီးလေ…၊ ဆယ်တန်းအောင်ရုံ သင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလောက်နဲ့ စင်ကာပူမှာ ကျောင်းလာတက်တော့ စာမေးပွဲကျတာ ကျောင်းသား အပြစ် မဟုတ်ဘူးလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်“ လို့ ကိုယ့်သားသမီး အရည်အချင်း ကိုယ်မသိဘဲ စင်ကာပူရောဂါထနေတဲ့ မိဘတွေနဲ့ စင်ကာပူ စွဲလန်းသူ လူငယ်တချို့ကို ရည်ညွှန်းပြီး သူက ပြောပါတယ်။
မိဘတွေက သူကိုယ်တိုင် စင်ကာပူရောဂါ ထလို့ သားသမီးကို အတင်းပို့လွှတ်ပြီး၊ သူက ရပ်ကွက်ထဲ လှည့်ပတ် ကြွားနေတယ်။ သားသမီးက အဖြစ်မှန် ပြောတော့လည်း လက်မခံဘူးဆိုတာကတော့ တကယ့်ကို အဆင်အခြင်မဲ့တဲ့ မိဘလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ အဲဒီလို မိဘမျိုး ရှိသလို လင်သားကို စိတ်မချလို့ နောက်က လိုက်လာတဲ့ မိန်းမတွေကြောင့် ခဏနေတော့ လင်မယားချင်း ပြဿနာတွေ တက်ကုန်ပြီး စင်ကာပူမှာပဲ လင်ကွာ မယားကွာတွေ ဖြစ်မယ် တကဲကဲ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း ရှိသတဲ့။ အိုး… ဒို့ မြန်မာလို့ ဂုဏ်ယူရမှာလား။
သူ အပိုတွေ ပြောနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိန်းကလေးတွေ ဒီလိုတပည့်တွေကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမမို့ သူမိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာပုံ ပေါ်ပါတယ်၊ သူတို့နဲ့ ထပ်တူ ခံစားပြီး သူပြောပြနေတာလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီစာစုလေး ရေးဖြစ်တာကလည်း အပိုတွေ ချဲ့ကားပြီး ရေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါလေး ဖတ်မိတဲ့ မိဘတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ မောင်နှမတွေ ကိုယ့်နှမ၊ ကိုယ့်အစ်မတွေများ စင်ကာပူ ဆိုတာကို သွားဖြစ်ခဲ့ရင်၊ စင်ကာပူရောဂါများ ထလာရင် ဆေးညွှန်းရှာထားနိုင်အောင်ပါ။
ဆေးညွှန်းကတော့ အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလို ပညာပါပဲ။ အိမ်နဲ့ကျောင်းလောက်သာ ကျင်လည်ဖူးရုံနဲ့၊ အမေမှာတဲ့ ဆန်တခွဲ သုံးတင်းနဲ့ မလဲဆိုသလိုမျိုး၊ ဆရာပြောသမျှ အမှန်လို့ စွတ်ယုံတတ်သူမျိုးတွေ နိုင်ငံခြားမှာ ဒုက္ခနဲ့လှလှ တွေ့တတ်နိုင်ကြောင်း နည်းနည်း စဉ်းစားမိသွားရင် ရေးရကျိုး နပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောဂါကို ပညာဆေးဝါးနဲ့ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ကြပါစေဗျာ။
10 Comments: သစ်သစ်
01/11/2010 at 5:27 am	ရေးထားတာတွေ သွေးထွက်အောင်မှန်လွန်းလို့ ထောက်ခံမိပါတယ်…
01/11/2010 at 7:14 am	လန်ဒန်မှာ အေးရှန်းရုပ်တို့ အမဲရုပ်တို့ဆို ရဲက ကားကိုတားတတ်တယ်လို့ ဟိုတခါက သတင်းစာမှာ တယောက်က မကြေမနပ် အော်နေတာ ဖတ်ဘူးတယ်။ ကျွန်တော်တော့ East London မှာ ဆယ်နှစ်ရှိပြီနေလာတာ ဘယ်သူကမှ အဲလိုမလုပ်သေးပါ။ မနှစ်ကတော့ ကားမောင်းတာ မြန်တယ်ဆိုပြီး ရဲလိုက်လာပြီး ရပ်ခိုင်းတယ်။ Insurance တို့ MOT တို့ ကို သူဖုံးဆက်ပြီးစစ်တယ်။ အားလုံး up to date တွေပါ။ နောက်တော့ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး သွာခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့ကိုလဲ ထည့်ပြောထားတယ်လေ။ ဆရာဝန်လို့ ဒီက ဆေးရုံ ဘယ်အဆောင်မှာ အလုပ်လုပ်တယ်လို့။ သူကပြောတယ် ဒေါက်တာ ကားကို ဖြေးဖြေးမောင်းတဲ့ မဟုတ်ရင် အရေးပေါ်ကို ရောက်နေအုံးမယ်တဲ့ ။ Thanks for reminding me လို့ပြောလိုက်ရတယ်။
01/11/2010 at 4:16 pm	ဆရာ september myo ခင်ဗျား
Reply	Pann Pyo Lat
01/11/2010 at 11:50 pm	တကယ်တမ်းပြောရရင် မြန်မာတွေကိုက စည်းကမ်းမရှိအခွင့်အရေးသမားတွေဖြစ်လားသလားလို့ပါ။ ကိုယ့်ကို ၀ိုင်းနေရာပေး အစစအရာရာလုပ်ပေးမှာကို မျော်လင့်ချက်မျိုးနဲ့တော့ နိုင်ငံခြားမှာ နေရာရမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကို နေရာပေးလာအောင် အရည်အချင်းရှိအောင် အ…မြဲသွေးထားနိုင်မှ တော်ကာကျတာ။
02/11/2010 at 5:23 am	ဒီဆောင်းပါးကို အရမ်းကြိုက်တယ် ရေးထားတာ သွေးထွက်အောင်မှန်လွန်းတယ်….
နိုင်ငံခြားကို အပျော်လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားကို လွတ်လပ်မှု ရှာဖို့ လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားကို ယောက်ျား၊ မိန်းမ ရှာဖို့ လာတာ မဟုတ်ဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် အစိုးရ မကောင်းလို့၊ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့၊ လို့… လို့… လို့…. တွေနဲ့ သူလာတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်လို့ လာတာ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ချင်လို့ လာတာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ရလို့ လာတာ။
02/11/2010 at 7:23 am	ကြောက်စရာ ကောင်းလိုက်တာ..။
Reply	aung din
02/11/2010 at 2:22 pm	စင်ကာပူမှာ မှ မဟုတ်ဖူး။ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပညာလိုတယ်။ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ရုန်းကန်ရတာပဲ။
Reply	Kyaw Lin Oo
03/11/2010 at 3:07 am	အင်း ခင်များ စာကို ဖတ်ရတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က ကျနော် နိုင်ငံခြားကို ထွက်ဖို့ ကြိုးစားမိ တာကို သွားသတိရတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျနော့်ဘ၀ ဟာ မသေချာမရေရာတဲ့အချိန်၊ ကျောင်း တွေပိတ်ထားလို့ စိတ်လေနေပြီး ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့လဲ ကျောင်းဆက်မတက်ချင်တော့ တဲ့ အချိန်။ လှိုင်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကို တမ်းတနေပြီး ရွာသာကြီးဆိုယင်တော့ မတက်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ် ထားတဲ့အချိန်။ နိုင်ငံခြားမှာ ၁၀ နှစ် နေပြီး အခုတော့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ဖို့ စိတ်ကူးနေပါပြီ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟို တစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ သူက ဒီဘက်မှာ နိုင်ငံသား တောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ သူအနေနဲ့က မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ဆိုယင် double citizen တို့ special protection တို့ ပေးရမယ် စသည်ဖြင့် ပြောတယ်ဗျာ။ မြန်မာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်လာတဲ့ နိုင်ငံသားတွေအတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်မှ ပြည်တွင်းပြန်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေက လက်တွေ့တော့ မကျဘူးထင်တယ်ဗျ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က နိုင်ငံခြားထွက်တုန်းက စိန်ခေါ်မှု တွေရှိနေသလို၊ အခုအချိန်မှာလည်း ပြည်တွင်းပြန်ယင်အလားတူ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေ၊ အထူးသဖြင့် ပညာတတ်လူငယ်တွေ အခုအချိန်မှာ ပြည်တွင်းပြန်ပြီး တိုင်းပြည် ထူထောင်ရေးအတွက် လုပ်နိုင်ယင် တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ပိုဖြစ်နိုင်မလားလို့ တွေးမိပါတယ်ဗျာ။
03/11/2010 at 8:02 am	ဒီဆောင်းပါးကတော့ ၂၀၁၀ မှာ အကြိုက်ဆုံး ဆောင်းပါးတွေထဲ က နံပါတ်တစ် ပါပဲဗျာ။
03/11/2010 at 2:59 pm	good post. i heard similar stories from here and there.pls write more about different problems that some new generation faces in abroad due to lack of knowledge,language ,education,working experiences and professional.so that can give awareness to prepare what they have to equip fully and confidently before going abroad.